Dameer sababay burburka diyaaradii ku dhacday magaalada Beledweyne - Jowhar Somali Leader
Home News Dameer sababay burburka diyaaradii ku dhacday magaalada Beledweyne
Diyaaraddii ku burburtay garoonka Beledweyn ayaa la sheegay in ay dhacday ka dib markii ay aragtay dameer ku socday jidkii ay ku degi lahayd.
Diyaarad oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha Bluebird Aviation oo laga leeyahay Kenya ayaa shalay ku dhacday magaalada Baledweyne xilli ay cagadhiganeysay.
“Shilkaasi in uu dameer sababay waxaa noo xaqiijiyey shaqaalihi diyaaradda saarnaa, ciidamada AMISOM ee garoonka ku sugan iyo duuliyihi diyaaradda saarnaa intaba,” sida waxaa xaqiijiyay maamulaha shirkadda diyaaradda Bluebird.
Maareeyaha Guud ee shirkadda diyaaradaha Bluebird, Duuliye Xuseen Maxamed, ayaa ka warramay shilkaas iyo waxa sababay.
“Mid ka mid ah diyaaradaha ay shirkaddu lahayd ayaa ku burburtay gudaha Soomaaliya, waxayna siday raashiin loogu talagalay ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM ee ku sugan magalada Beledweyne,” ayuu yiri Xuseen.
“Diyaaraddu waxay subixi hore ka soo kacday Jabuuti, markii ay garoonka soo cagadhiganeysay waxaa waddada marayay dameer, diyaaradduna waxay ku dhacday dameerki sidaas ayeyna waddadi uga baxday balse shaqaalihi saarnaa way ka badbaadeen shilkaas”.
“Diyaaradda markay cagadhiganeysay oo 200 oo mitir qayaasti ay dhulka u jirtay, dameer ayaa si kedis ah duurka uga soo baxay oo waddadi ay diyaaradda ku dagi lahayd ka gudbay.
“Diyaaraddii dameerkii ayey ku dhacday shilkaasina sidaas ayuu ku dhacay. Alxmadulillah seddexdii qof oo diyaaraddaas saarnaana wey ka badbaadeen,” ayuu yiri Kabtan Xuseen Maxamed.